Friday April 05, 2019 - 09:40:57 in Wararka by Super Admin
Qaraxan oo ahaa mid loo adeegsaday gaari laga soo buuxiyay walxaha qarxa ayaa xalay lagu beegsaday isku imaatin kasoo hor jeeda xarunta ciidamada Police-ka ee Iskuul buluuziyo halkaas oo ay ku caweynayeen saraakiil katirsan maleeshiyaatka police-ka iyo kuwa amniga.
Dad goob joogayaal ah ayaa sheegay in jugta qaraxa laga maqlay degmooyin dhowr ah oo ku yaalla magaalada Islamarkaana uuradiisa laga arkayey meelo fog fog taas oo muujinaysay in qaraxu uu ahaa mid aad u xooggan.
"Saraakiil katirsan Mujaahidiinta oo aan la xiriirnay ayaa noo sheegay in qaraxa uu dhacay xilli goobta dhoobnaayeen saraakiil katirsan ciidamada Police-ka, islamarkaana uu sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray cadowga Allaah" ayaa lagu yiri war lagasii daayay Idaacadda Andalus ee afka xarakada ku hadasha.
Ugu yaraan inta la xaqiijiyey 16 xubnood oo ka mid ah dowladda Federaalka ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqotay qaraxa kuwaas oo u badnaa ciidamada iyo saraakiisha Police-ka sida ay xaqiijiyeen saraakiisha booliska.
Qaraxan ayaa xalay fajaciso iyo filanwaa ku noqday Saraakiisha ammaanka dowladda maadama uu dhacay wakhti ay xiran yihiin dhammaan waddooyinka magaalada Muqdisho maleeshiyaatkuna ay wadeen wax ay ku sheegeen baaritaanno looga hortagayo qaraxyada Al Shabaab.
Cabdi Raxmaan Yariisoow oo dowladda Federaalka ugu magacaaban guddoomiyaha gobolka Banaadir, ayaa horaantii todobaadkan ku dhawaaqay in magaalada lagu soo rogay xaalad deg deg ah lana xiray dhammaan waddooyinka, isagoo tilmaamay in maleeshiyaatku ay qaadeen howlgal ballaaran oo lagu sugayo amniga magaalada.